ပွနျလညျဦးမော့လာသညျ့ မလေးရှားကားလုပျငနျး Proton - Logistics Guide
တရုတျကားထုတျလုပျသူ Geely သညျ ၂၀၁၇ ခုနှဈတှငျ Proton တှငျ အစုရှယျယာ ဝယျခဲ့ပွီး လီကိုခနျြရောငျအား ပဲ့ကိုငျအဖွဈ ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ မလေးရှား ပွညျတှငျးဈေးကှကျထဲတှငျ တိုယိုတာနှငျ့ ဟှနျဒါတို့ကို ပရိုတှနျက မှေးမှိနျအောငျ ပွုနိုငျခဲ့သညျ။
Proton သညျယခုအခါ ထိုငျး၊ အငျဒိုနီးရှား၊ စငျကာပူနှငျ့ ဘရူနိုငျးနိုငျငံမြားသို့ ဈေးကှကျခြဲ့ထှငျရနျ စီစဉျနပွေီး အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေ ဈေးကှကျကိုလညျး စဉျးစားနပွေီဖွဈသညျ။
တရုတျကားထုတျလုပျသူ Geely က မလေးရှား ကားဈေးကှကျထဲ Proton အမှတျတံဆိပျ ကရြှုံးနသေညျကို ပွနျလညျခေါငျးထောငျအောငျ လုပျဖို့ တာဝနျပေးအပျခဲ့သညျ။ နှဈနှဈကွာပွီးခြိနျတှငျ ဂပြနျကားလုပျငနျးကွီးမြား ဖွဈကွသော ဟှနျဒါနှငျ့ တိုယိုတာတို့ကို ပရိုတှနျက မှေးမှိနျအောငျ ပွုနိုငျခဲ့ပွီး ယခုအခါ အရှတေ့ောငျအာရှ ကားဈေးကှကျထဲ ခွလှေမျးခြဲ့ထှငျရနျ စိုငျးပွငျးနပွေီး အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေကိုပါ စဉျးစားခငျြ့ခြိနျနသေညျ။ ပရိုတှနျ ဈေးကှကျခြဲ့ထှငျရနျအတှကျ အဟနျ့အတား တဈခု ရှိနသေညျ။ ယငျးမှာ မလေးရှားနိုငျငံသညျ လကျဝဲကပျမောငျးစနဈ ကငျြ့သုံးသဖွငျ့ ပရိုတှနျကားမြားသညျ စတီယာရငျကို ယာဘကျတှငျ တပျဆငျထုတျလုပျလကျြ ရှိသညျ။ အကယျ၍ ဝဲဘကျတှငျ တပျဆငျထုတျလုပျမညျဆိုပါက ကုနျကစြရိတျ ပိုမိုကုနျကမြညျ။ သို့ဖွဈရာ လကျဝဲကပျမောငျးစနဈ ကငျြ့သုံးသညျ့ နိုငျငံမြားကိုသာ ရှေးခယျြပွီး ကနဦးခွလှေမျးမြား လှမျးရမညျ ဖွဈသညျ။
၂၀၁၇ ခုနှဈတှငျ Geely က Proton တှငျ အစုရှယျယာ ၄၉.၉ ရာခိုငျနှုနျး ဝယျယူခဲ့ပွီး လီကို စီအီးအိုအဖွဈ ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ ပရိုတှနျသညျ မလေးရှားနိုငျငံ ပွညျတှငျးထုတျကားဖွဈပွီး နိုငျငံဂုဏျဆောငျသညျ့ ကားအမှတျတံဆိပျ ဖွဈနသေဖွငျ့ ယခုလို တရုတျကားကုမ်ပဏီကွီးက ရှယျယာဝယျယူပွီး ကွိုးကိုငျခယျြလှယျသညျကို ကနျ့ကှကျပွောဆိုဝဖေနျမှုမြား ရှိခဲ့သညျ။ ထိုအထဲတှငျ လကျရှိဝနျကွီးခြုပျဖွဈသူ မဟာသီလညျး ပါဝငျသညျ။ ထိုသို့ နိုငျငံဂုဏျဆောငျ ကားအမှတျတံဆိပျဖွဈနသေဖွငျ့ နိုငျငံတျောမှ အထောကျအပံ့ပေးပွီး အသကျဆကျပေးထားသညျ။ အခွအေနယေိမျးယိုငျနသေျောလညျး ဆကျလကျရပျတညျနစေခေဲ့သညျ။ လီက ကုနျကစြရိတျမြား လြှော့ခပြဈခွငျးကို အပွငျးအထနျဆောငျရှကျခဲ့သညျ။ ကားရောငျးဈေးကို လြှော့ခပြေးနိုငျခဲ့ပွီး ဈေးကှကျထဲတှငျ အောငျမွငျမှုမြား ရရှိခဲ့သညျ။
ယခုအခါ Geely က လီကို ဒသေတှငျး တိုးခြဲ့ရနျ ညှနျကွားသညျ။ လကျဝဲကပျမောငျးစနဈ ကငျြ့သုံးသော နိုငျငံမြား ဖွဈသညျ့ ထိုငျး၊ အငျဒိုနီးရှား၊ စငျကာပူနှငျ့ ဘရူနိုငျး နိုငျငံမြားတှငျ ဦးစှာစူးစိုကျ လုပျကိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ လကျရှိအနအေထားတှငျ ပငျလယျရပျခွား ရောငျးအားသညျ စုစုပေါငျး ရောငျးခရြသညျ့ ကားစီးရေ၏၁% မြှသာ ရှိပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈတှငျ လေးဆတိုးအောငျ ရညျမှနျးခကျြခမြှတျကာ အကောငျအထညျဖျောသှားမညျ ဖွဈသညျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈတှငျ စုစုပေါငျးရောငျးခရြသညျ့ ကားစီးရေ၏ ၄၀% ကို ပငျလယျရပျခွားဈေးကှကျမြားထံမှ ရရှိအောငျ လုပျဆောငျမညျဖွဈသညျ။
ကမ်ဘာ့ကားဈေးကှကျထဲတှငျ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ခုနှဈအတှငျး ရောငျးအား ၁ % ကဆြငျးခဲ့သျောလညျး အာဆီယံဈေးကှကျတှငျ ၃% မွငျ့တကျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ ဝယျလိုအား မွငျ့တကျနသေညျ့အထဲ ပရိုတှနျ နရောယူဖို့ ကွိုးပမျးရာ၌ ဂပြနျကားအမှတျတံဆိပျမြားကို ပရိုတှနျမှ ယှဉျနိုငျမညျ မဟုတျသျောလညျး သီးသနျ့ဈေးကှကျဝစေုတဈခု ရရှိအောငျ လုပျဆောငျသှားမညျဟု လီက ပွောသညျ။ ပွညျတှငျးဈေးကှကျတှငျလညျး နံပါတျတဈနရောကို ယူထားသညျ့ မလေးရှားကားလုပျငနျးတဈခု ဖွဈသော Perodua ကို ယှဉျပွိုငျရမညျ ဖွဈသညျ။
ပရိုတှနျ၏ ရှယျယာအမြားစုကို မလေးရှားလုပျငနျးစုကွီးဖွဈသော DRB-HICOM က ပိုငျဆိုငျသညျ။ Geely နှငျ့ လကျတှဲပွီးခြိနျတှငျ မျောဒယျအဟောငျးမြား ထုတျလုပျခွငျးကို ရပျဆိုငျးပဈလိုကျသညျ။ ရှဈလအတှငျးမှာ မျောဒယျအသဈ ခွောကျမြိုး စတငျထုတျလုပျခဲ့သညျ။ Geely၏ Boyue ကို မှမျးမံထားသော X70 SUV လညျး အပါအဝငျဖွဈသညျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈတှငျ မလေးရှားနိုငျငံ ပွညျတှငျးဈေးကှကျတှငျ ဒုတိယအကွီးမားဆုံး ကားထုတျလုပျရောငျးခသြူအဖွဈသို့ ရောကျရှိခဲ့ပွီး ဈေးကှကျဝစေု ၁၆.၇% ရရှိခဲ့သညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ ကိုးနှဈတာအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ အမွတျပျေါသညျ့နှဈတဈနှဈ ဖွဈခဲ့သညျ။ ယခငျ စတုတ်ထနရောမှ ဟှနျဒါနှငျ့ တိုယိုတာတို့ကျို ကြျောတကျပွီး ဒုတိယနရောသို့ ရောကျရှိနိုငျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
နံပါတျ(၁) နရောတှငျ အပွတျအသတျ အသာဖွငျ့ နရောယူထားသညျ့ Perodua ကို ဂပြနျကားလုပျငနျး Daihatsu က ကြောထောကျနောကျခံပွုပေးထားသညျ။ လီက Perodua ကို လာမညျ့ ၂၀၂၂ ခုနှဈတှငျ ကြျောတကျရနျ ရညျမှနျးထားကွောငျး ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့သညျ။
ကုနျကစြရိတျလြှော့ခမြှုကို အပွငျးအထနျ လုပျဆောငျခဲ့ရာ၌ ယာဉျအစိတျအပိုငျးမြားကို ဈေးသကျသာသညျ့ တရုတျကုမ်ပဏီမြားထံမှ တိုကျရိုကျမှာကွားပွီး ပွညျတှငျးဖွနျ့ဖွူးသူမြားမှတဈဆငျ့ ဝယျယူခွငျးမြားကို ရပျဆိုငျးပဈသညျ။ ထိုသို့ ဆောငျရှကျခွငျးကွောငျ့ ကုနျကစြရိတျ ၃၀% ဝနျးကငျြ လြော့ကသြှားသညျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈတှငျ ကုနျကစြရိတျကု အမရေိကနျဒျေါလာ ၆၁သနျးခှဲ လြှော့ခနြိုငျခဲ့သညျ။. ကုနျလှောငျရုံမြားကိုလညျး ၁၆ ခု ရှိခဲ့ရာမှ ၄ ခုသို့ လြှော့ခခြဲ့သညျ။ ကုမ်ပဏီပိုငျ ယာဉျစီးရေ ၁၅၀၀ မှ စီးရေ ၁၀၀၀ ကို ရောငျးထုတျပဈလိုကျသညျ။ ကုမ်ပဏီစရိတျဖွငျ သတငျးစာဝယျဖတျခွငျးမှအစ ပိတျပငျခဲ့သညျ။
ပရိုတှနျကို ၁၉၈၃ ခုနှဈတှငျ စတငျထုတျလုပျခဲ့သညျ။ နိုငျငံဂုဏျဆောငျကားလုပျငနျးအဖွဈ မကျြနှာပနျးလှသညျ။ ပွညျတှငျးဈေးကှကျကို ဦးဆောငျသူ ဖွဈလာခဲ့သညျ။ သို့သျော စံအဆငျ့အတနျးတှငျ နောကျကကြနျြရဈသညျ။ ရောငျးခပြွီးသညျ့နောကျ နောကျဆကျတှဲ ဝနျဆောငျမှုမြား ပွညျ့ပွညျ့၀၀ ပေးအပျခွငျး မပွုခဲ့ခြေ။ သို့ဖွဈရာ ဈေးကွီးပွီး စိတျဝငျစားစရာမကောငျးသညျ့ကား ဖွဈလာခဲ့ပွီး ရောငျးအားလညျး ကဆြငျးသှားသညျ။ယခုအခါ ပရိုတှနျ ဦးပွနျမော့လာပွီး အမွတျရသညျ့အဖွဈသို့ ရောကျရှိလာသောအခါ ဝနျကွီးခြုပျ မဟာသီ လသေံပွောငျးသှားသညျ။
‘‘အခုအခါ ပရိုတှနျက ကားစီးရေ တဈသိနျး ရောငျးရတယျ။ အမွတျလညျး ပျေါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စီမံခနျ့ခှဲမှုကွောငျ့၊ ပွီးတော့ နညျးပညာကောငျးမှနျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ” ဟု သူက သတငျးသမားမြားကို ယခုလ တှဆေုံ့ရာ၌ ပွောပွခဲ့သညျ။ သူကိုယျတိုငျလညျး ပရိုတှနျကား မျောဒယျ X70 SUV အနီရောငျ အသဈတဈစီး ပိုငျဆိုငျထားသညျ။
ဟနျဗိုငျးရပျဈဂယကျ Hyundai ကားစကျရုံရပျ
ပြန်လည်ဦးမော့လာသည့် မလေးရှားကားလုပ်ငန်း Proton
တရုတ်ကားထုတ်လုပ်သူ Geely သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Proton တွင် အစုရှယ်ယာ ၀ယ်ခဲ့ပြီး လီကိုချန်ရောင်အား ပဲ့ကိုင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ မလေးရှား ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲတွင် တိုယိုတာနှင့် ဟွန်ဒါတို့ကို ပရိုတွန်က မှေးမှိန်အောင် ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
Proton သည်ယခုအခါ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံများသို့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် စီစဉ်နေပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ ဈေးကွက်ကိုလည်း စဉ်းစားနေပြီဖြစ်သည်။
တရုတ်ကားထုတ်လုပ်သူ Geely က မလေးရှား ကားဈေးကွက်ထဲ Proton အမှတ်တံဆ်ိပ် ကျရှုံးနေသည်ကို ပြန်လည်ခေါင်းထောင်အောင် လုပ်ဖို့ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်ကြာပြီးချိန်တွင် ဂျပန်ကားလုပ်ငန်းကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဟွန်ဒါနှင့် တိုယိုတာတို့ကို ပရိုတွန်က မှေးမှိန်အောင် ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အရှေ့တောင်အာရှ ကားဈေးကွက်ထဲ ခြေလှမ်းချဲ့ထွင်ရန် စိုင်းပြင်းနေပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကိုပါ စဉ်းစားချင့်ချိန်နေသည်။ ပရိုတွန် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် အဟန့်အတား တစ်ခု ရှိနေသည်။ ယင်းမှာ မလေးရှားနိုင်ငံသည် လက်ဝဲကပ်မောင်းစနစ် ကျင့်သုံးသဖြင့် ပရိုတွန်ကားများသည် စတီယာရင်ကို ယာဘက်တွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်လျက် ရှိသည်။ အကယ်၍ ဝဲဘက်တွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည်ဆိုပါက ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုကုန်ကျမည်။ သို့ဖြစ်ရာ လက်ဝဲကပ်မောင်းစနစ် ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံများကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး ကနဦးခြေလှမ်းများ လှမ်းရမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Geely က Proton တွင် အစုရှယ်ယာ ၄၉.၉ ရာခိုင်နှုန်း ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး လီကို စီအီးအိုအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ပရိုတွန်သည် မလေးရှားနိုင်ငံ ပြည်တွင်းထုတ်ကားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်သည့် ကားအမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်နေသဖြင့် ယခုလို တရုတ်ကားကုမ္ပဏီကြီးက ရှယ်ယာဝယ်ယူပြီး ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်သည်ကို ကန့်ကွက်ပြောဆိုဝေဖန်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ မဟာသီလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကားအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နေသဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ အထောက်အပံ့ပေးပြီး အသက်ဆက်ပေးထားသည်။ အခြေအနေယိမ်းယိုင်နေသော်လည်း ဆက်လက်ရပ်တည်နေစေခဲ့သည်။ လီက ကုန်ကျစရိတ်များ လျှော့ချပစ်ခြင်းကို အပြင်းအထန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကားရောင်းဈေးကို လျှော့ချပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ထဲတွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။
ယခုအခါ Geely က လီကို ဒေသတွင်း တိုးချဲ့ရန် ညွှန်ကြားသည်။ လက်ဝဲကပ်မောင်းစနစ် ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် ဘရူနိုင်း နိုင်ငံများတွင် ဦးစွာစူးစိုက် လုပ်ကိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအနေအထားတွင် ပင်လယ်ရပ်ခြား ရောင်းအားသည် စုစုပေါင်း ရောင်းချရသည့် ကားစီးရေ၏ ၁% မျှသာ ရှိပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လေးဆတိုးအောင် ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်းရောင်းချရသည့် ကားစီးရေ၏ ၄၀% ကို ပင်လယ်ရပ်ခြားဈေးကွက်များထံမှ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ကားဈေးကွက်ထဲတွင် ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ရောင်းအား ၁ % ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း အာဆီယံဈေးကွက်တွင် ၃% မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ၀ယ်လိုအား မြင့်တက်နေသည့်အထဲ ပရိုတွန် နေရာယူဖို့ ကြိုးပမ်းရာ၌ ဂျပန်ကားအမှတ်တံဆိပ်များကို ပရိုတွန်မှ ယှဉ်နိုင်မည် မဟုတ်သော်လည်း သီးသန့်ဈေးကွက်ဝေစုတစ်ခု ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု လီက ပြောသည်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင်လည်း နံပါတ်တစ်နေရာကို ယူထားသည့် မလေးရှားကားလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သော Perodua ကို ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
ပရိုတွန်၏ ရှယ်ယာအများစုကို မလေးရှားလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သော DRB-HICOM က ပိုင်ဆိုင်သည်။ Geely နှင့် လက်တွဲပြီးချိန်တွင် မော်ဒယ်အဟောင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်သည်။ ရှစ်လအတွင်းမှာ မော်ဒယ်အသစ် ခြောက်မျိုး စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Geely၏ Boyue ကို မွမ်းမံထားသော X70 SUV လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဒုတိယအကြီးမားဆုံး ကားထုတ်လုပ်ရောင်းချသူအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ဝေစု ၁၆.၇% ရရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ကိုးနှစ်တာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမြတ်ပေါ်သည့်နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင် စတုတ္ထနေရာမှ ဟွန်ဒါနှင့် တိုယိုတာတို့ကိ်ု ကျော်တက်ပြီး ဒုတိယနေရာသို့ ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နံပါတ်(၁) နေရာတွင် အပြတ်အသတ် အသာဖြင့် နေရာယူထားသည့် Perodua ကို ဂျပန်ကားလုပ်ငန်း Daihatsu က ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးထားသည်။ လီက Perodua ကို လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ကျော်တက်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချမှုကို အပြင်းအထန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ၌ ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကို ဈေးသက်သာသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများထံမှ တိုက်ရိုက်မှာကြားပြီး ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးသူများမှတစ်ဆင့် ၀ယ်ယူခြင်းများကို ရပ်ဆိုင်းပစ်သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် ၃၀% ၀န်းကျင် လျော့ကျသွားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၁သန်းခွဲ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။. ကုန်လှောင်ရုံများကိုလည်း ၁၆ ခု ရှိခဲ့ရာမှ ၄ ခုသို့ လျှော့ချခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီပိုင် ယာဉ်စီးရေ ၁၅၀၀ မှ စီးရေ ၁၀၀၀ ကို ရောင်းထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ကုမ္ပဏီစရိတ်ဖြင် သတင်းစာဝယ်ဖတ်ခြင်းမှအစ ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ပရိုတွန်ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်ကားလုပ်ငန်းအဖြစ် မျက်နှာပန်းလှသည်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်သူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် စံအဆင့်အတန်းတွင် နောက်ကျကျန်ရစ်သည်။ ရောင်းချပြီးသည့်နောက် နောက်ဆက်တွဲ ၀န်ဆောင်မှုများ ပြည့်ပြည့်၀၀ ပေးအပ်ခြင်း မပြုခဲ့ချေ။ သို့ဖြစ်ရာ ဈေးကြီးပြီး စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းသည့်ကား ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ရောင်းအားလည်း ကျဆင်းသွားသည်။
ယခုအခါ ပရိုတွန် ဦးပြန်မော့လာပြီး အမြတ်ရသည့်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ ၀န်ကြီးချုပ် မဟာသီ လေသံပြောင်းသွားသည်။
‘‘အခုအခါ ပရိုတွန်က ကားစီးရေ တစ်သိန်း ရောင်းရတယ်။ အမြတ်လည်း ပေါ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်၊ ပြီးတော့ နည်းပညာကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူက သတင်းသမားများကို ယခုလ တွေ့ဆုံရာ၌ ပြောပြခဲ့သည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပရိုတွန်ကား မော်ဒယ် X70 SUV အနီရောင် အသစ်တစ်စီး ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဂယက် Hyundai ကားစက်ရုံရပ်
ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံနှငျ့ ကုနျတငျယာဉျရပျနားစခနျးသို့ ဝငျရောကျမညျ့သူမြား လိုကျနာကွရနျ
အများပိုင်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာ ရောင်းဝယ်နိုင်မည့် ဒုတိယဈေးကွက် ဖော်ဆောင်မည်
ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဒေါ်လာတန်ဖိုး အနည်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာ
နယ်လိုင်စင် Taxi ဈေးကွက်